hadda aad joojiso dhoofinta Spotify playlist
Qaybta 1. Waraaqda aad playlist Spotify ka Google Chrome iyo dib u dajiyaan
Qaybta 2. dhoofinta playlist ah sida file qoraalka ah iyo soo dejinta
Qaybta 3. Nuqul ka mid wadaago playlist Spotify
Record Spotify music online lacag la'aan ah la TunesGo
Playlists Spotify noqon karaa xeelad badan, gaar ahaan haddii aad tahay qof aniga oo kale ah. Anigu waxaan ahay yara ee Klutz ah aad aragto oo ma aha in wax aan caadi ahayn ii aakhirka la tirtiray songs, kuwan raadkaygay iyo playlists on my account Spotify. Hadda, waxa ay noqon kartaa qayb ka ah dib u dhac u ah cid kasta oo ka music lover halis ah. Hubi in aad fahmi lahaa waxaan ahay.
Iyo, sidaas darteed halkan ayaan raadinayay siyaabo inuu ka baxo xaaladan oo heli heesaha oo dhan iyo playlists dib Spotify markii aan ka helay qaar ka mid ah fursadaha cajiib ah inay sidaa sameeyaan. Waxaan u tegayaa inaan iyaga oo dhan aan idinla wadaago maanta ahay.
1.Extract aad playlist Spotify ka Google Chrome iyo dib u dajiyaan
Waa kordhin fudud oo Google Chrome kuu oggolaanaysa in aad soo saaro playlists aad si nabad ah iyadoo la kaashanayo click hal. Taasi waa xaq!
Muddo kordhintaasi waxa ay sii dayn doonaa inaad Macdan ah isugu soo diyaariyeen .m3u playlist / json ka mid ah waxyaabaha ka playlists Spotify iyadoo la kaashanayo hal click. Halkan waxa aad leedahay in la sameeyo.
Talaabada 1: Riix link soo socda si download Spotify playlist shawladda, plugin ah ee Google Chrome. On shaashadda soo socda, jaraa'id badhanka dhanka midig gacanta oranaya "Add to Chrome '.
Talaabada 3: Hadda oo aad si guul leh ku daray ayaa kordhinta on Google Chrome, waa in aad arki button yar xaq u socda si button menu on Chrome ah (fiiri meesha midab dhinaca gacanta midigta ee shaashada this).
Talaabada 4: waa qaybtii ugu danbaysay, u tag https://play.spotify.com oo taga si 'playlist', soo qaado playlist ah adigoo gujinaya ku yaal. Riix "Spotify playlist shawladda" button oo sug in ay ka shaqeeyaan, ay dhacdo in aad haysato waxyaabo aad u badan oo aad playlist, oo waxa uu xitaa si toos ah ugu rogto doonaa playlist ku dura siman 5 ilbiriqsi. Marka dhameysatay, tab cusub oo la furo doonaa natiijo formatted agabka playlist aad.
2.Export playlist ah sida file qoraalka ah iyo soo dejinta
Hadda, haddii aadan in ok degsado kordhin Google Chrome iyo dhan, waxaad isku dayi kartaa habkan sida ay tahay mid dhab ah u fudud in ay raacaan. Halkan sida ay u bilaabaan. Fur Spotify on desktop iyo sidoo kale abuurtaan dukumenti Word cusub. Iyaga dhinac on desktop. Hadda, waxaa la gaaray waqtigii aad si loo muujiyo heesaha oo dhan kuwa aad rabto in dhoofinta on Spotify oo si fudud u ah kuwaa oo ku saabsan in dokumentiga in aad furay. Fiiro u yeelo in magacyada track ama song lagu dhejiyo lahaa in dokumentiga sida hyperlinks in marka riixi aad qaadan doonaa kuwa heeso gaar ah oo ku saabsan Spotify.
Halkan shaashadda ka mid ah sida tani u ekaan lahaa.
3.Copy la wadaago playlist Spotify
Hadda, mar kale waxay u shaqaysaa on desktop si fadlan xasuuso in aadan awoodi doonaan in ay isticmaalaan habkan ku saabsan qalabka telefoonada gacanta ee aad sida Android, iPhone ama iPad.
Ka hor inta aadan bilaabin, si loo hubiyo in aad leedahay Spotify lagu rakibay on your computer. Halkan waa link si ay u soo bixi. Marka aad la sameeyo degsado app iyo waxa sidoo kale ku rakibidda, raac tallaabooyinka hoos ku qoran.
Talaabada 1: Burcad app Spotify iyo guji playlist in aad rabto in aad soo guuriyeen. Hadda Waa in aad aragto liiska gabayo playlist in aad muujin karaan ama ay doortaan ..
Talaabada 2: Guji mid ka mid ah kuwan raadkaygay ka dibna in ay doortaan heesaha oo dhan in playlist ah, jaraa'id Ctrl + A (Windows) ama Command + A (Mac). Tani waa in hadda loo muujiyo oo dhan tareenka iyo bedelaan midab cawlan oo si fudud.
Tallaabada 3: Ma click ah xaq ay ka midka hadda iyo dhibic ka hoos menu, dooro ikhtiyaarka ah ee 'Add to'. Laga soo socota ee fursadaha, aad sidoo kale dooran kartaa 'New playlist' si ay u abuuraan playlist cusub Ulama magac cusub ama fudud oo ay doortaan mid ka mid ah playlists soo bandhigay.
Waa sidaas. Marka aad raacdo habkan, waxaad la kulmi doonaa abuuraya nuqul ka mid ah playlist in aad rabto in aad beddesho ma in aad xisaabta Spotify. Dhab ahaantii, waa sida ugu fiican ee la abuurayo playlist cusub laakiin aan mid ka mid ah mashaakil iyo dadaal u cabbudhinayo in uu galay ku daray heeso aad jeceshahay mid mid.
Download / Record Spotify music online lacag la'aan ah la TunesGo
Bal iska raaxayso, oo la Spotify Radio Markasta oo meel
> Resource > Spotify > dhoofinta Spotify playlist, kaabta Spotify playlist ama ka soo kabsadaan